Ny maha-zava-dehibe ny fitsipi-pitenenana sy ny mari-tsoratra tsara amin'ny bilaogy | Martech Zone
Ny maha-zava-dehibe ny fitsipi-pitenenana sy ny mari-tsoratra tsara amin'ny bilaogy
Asabotsy 6 Febroary 2010 Alarobia, Aprily 30, 2014 Erik Deckers
Fantatry ny olona mahalala ahy fa mety ho geek amin'ny fitsipi-pitenenana sy mari-piatoana kely aho. Na dia tsy mandeha lavitra loatra amin'ny fanitsiana ampahibemaso ny olona (manala baraka azy ireo manokana fotsiny aza aho) dia fantatro ny manitsy famantarana izay misy teny diso tsipelina, apostropika diso toerana, ary hadisoana matetika.
Noho izany, tsy ilaina intsony ny milaza azy, manandrana mandrakariva aho fa ho tonga amin'ny fofona gramatika ny fanoratako.
“Na amin'ny bilaogy aza?”
Eny, na dia amin'ny bilaogy aza.
“Saingy bilaogy dia heverina ho tsy ara-potoana sy mifampiresaka.”
Tsy dia araka ny noeritreretinao azy. Betsaka ny orinasa mandray ny famahanam-bilaogy, ary manandrana mamolavola endrika fitokisana sy azo itokisana izy ireo. Ary minoa izany na tsia, ny mpanjifa dia hitsara ny fahaizan'ny orinasa iray manontolo hanao ny iraka ifotony lehibe indrindra amin'ny fitsipi-pitenenana sy ny tsipelina PR flunky ambany iray.
“Andriamanitro ô, nanantona participle ianao! Tsy hividy ny vokatrao intsony izahay! ”
Aza mino ahy? Diniho tsara ireo hevitra ao amin'ny bilaogy politika rehetra mandritra ny fifidianana filoham-pirenena.
Na dia tsy mila mamoritra karazan'olona toy izany aza ianao (mila ampitahorina izy ireo), mila mamolavola endrika fahaizana sy matihanina ianao. Ary midika izany fa mila mitsipelina teny tsara ianao, ary mampiasa fitsipi-pitenenana sy mari-piatoana mety.
Handefa Doug DM indraindray aho momba ny apostropa diso toerana na teny diso tsipelina ao amin'ny iray amin'ireo lahatsoratry ny Teknolojia Marketing (izay raha ny fahitana azy angamba no antony Voasazy aho Nasaina nanoratra ity lahatsoratra ity aho).
Misy be dia be ny lesoka ara-pitsipi-pitenenana izay, raha ataonao izany, dia tonga dia manao anao ho moana (Tenin'i Copyblogger fa tsy ahy). Ny zavatra toa azy vs. izany ary ianao vs. ny anao dia lesoka tokony ho fantatrao tsara kokoa noho ny tokony hatao.
Betsaka ny olona no hilaza fa tsy tena zava-dehibe ny fitsipi-pitenenana sy ny tsipelina ao amin'ny bilaogy. Izahay dia tokony ho tsy ara-potoana sy milamina, ary tsy maninona intsony izany.
Tsara izany raha manoratra bilaogy manokana momba ny fiainanao manokana ianao, ary namana vitsivitsy fotsiny no ampoizinao hamaky. Afaka manao tsy ara-potoana araka ny itiavanao anao ianao, manadiso ny fanirian'ny fonao, ary mameno ny hafatrao aza fianianana ratsy nefa mampihomehy. (Mijery ianao, The Bloggess.)
Fa raha miresaka momba ny orinasanao, ny orinasanao na ny orinasanao ianao dia mila mitazona ny zava-drehetra hadio sy tsy misy hadisoana araka izay azo atao.
Tsy fahotana izany raha manao fahadisoana ianao. Betsaka ny fotoana nanaovako lesoka tamin'ireo lahatsoratry ny bilaogiko, indrindra ireo izay miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fitsipi-pitenenana sy ny mari-piatoana tsara. Fa afaka miverina manadio azy foana aho. Izany no zavatra tsara amin'ny bilaogy: tsy misy maharitra, toy ny magazine na brochure. Izy io dia antontan-taratasy velona. Asehoy ireo lahatsoratra telo taona.
Ka raha manao hadisoana iray na roa ianao dia aza kivy. Asaivo mijery azy ireo ny olona iray azonao antoka ary manome anao valiny marina. Miverena avy eo ary amboary izay tsy hitanao nandritra ny fanodinana voalohany nataonao.
Satria mety na tsy mety dia any ireo mpitsikilo. Ary ho avy ho anao izy ireo.
Erik dia VP an'ny Operations & Creative Services ho an'ny Serivisy bilaogy matihanina. Nandritra ny sivy taona mahery izy no nitoraka bilaogy (na dia mbola tsy nantsoina hoe bilaogy aza), ary efa 20 taona mahery no mpanoratra namoaka. Mpanoratra amin'ny hatsikana amin'ny gazety izy, ary nanoratra lahatsoratra momba ny asa aman-draharaha, tantara an-tsehatra, tantara an-tsehatra amin'ny radio, ary eo am-pamoronana tantara iray izy izao. Nanampy tamin'ny fanoratana Twitter Marketing ho an'ny Dummies izy, ary matetika dia miresaka amin'ny bilaogy sy media sosialy.
Ry AT&T U-andininy malala
Manara-maso ireo mpanoratra WordPress marobe miaraka amin'ny Google Analytics
6 Mey 2010 tamin'ny 11:54 hariva
Tsy azoko atao amin'ny teny ny fankasitrahako ny masonao nahita ny hadisoako! Matetika aho manoratra amin'ny fahatsiarovan-tena ary mijery ireo hadisoako nefa manaporofo mora toy ny tamin'ny fotoana nanoratako azy ireo. Somary ozona izany. Misaotra soa ho an'ny namana!
Rehefa manankarena sy malaza aho dia tsy maintsy manonitra anao! 😀